CAFFEE - (Gur. 10,2012): Gabaasa Raawwii Hojiiwwan Ji’oottan Jahan darbanii Pireezidaantii Itti Aanaa MNOtiin dhiyaate irratti yaada Koeewwan Dhaabbii Caffee
Koreewwa Dhaabbii kun gabaasa dhiyaate ilaalchisee hordoffiifi to’annoo gaggeessaa turan kilaastara sadiitti (kilaastara bulchiinsaafi seeraa, diinagdeefi hawaasummaa) qooduun cuunfaa xiinxala isaanii Dura Taa’aan Koree Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Kab. Obbo Lachiisaa Hayyuu bakka tokkotti dhiyeessaniiru.
Bulchiinsaafi seeraan walqabatee, olaantummaa seeraa kabachiisuuf tattaaffiin taasifamaa jiru, walitti dhufeenya naannolee ollaa waliin jiru cimsuufi nageenya buusuuf hojiin hojjetamaa jiru akka ciminaatti koree kanaan dhiyaateera. Haa ta’u malee, hojiin yakka dursanii itttisuu, gaaffii misoomaafi bulchiinsa gaarii ariitiin deebisuufi sirreeffama iskeelii miindaa hojjettootaa hojiitti hiikuu dhabuufi harkifannaan jiru xiyyeeffannoo kan barbaadu ta’uu ibsaniiru.
Gama diinagdeetiin, misooma qonnaafi baadiyyaaf xiyyeeffannoon kenname, carraa hojii uumuuf hojii barbaaddota calaluun pooteenshaala jiru adda baasuufi raawwiin sassaabbii galii gaarii ta’uus ibsaniiru. Haa ta’u malee, qindoominni sektara baadiyyaafi magaalaa jidduu jiru, sirna eksteenshinii qonnaa lafa qabsiisuun jijjiirama bu’uuraa fiduu, eebbifamtootaaf carraa hojii dhaabbii uumuufi weerara lafaafi ijaarsa seeraan alaa dhaabsisuuf tarkaanfiin fudhatamu bakka hundatti walfakkaachuu dhabuun walqabatee xiyyeeffannoo kan barbaadu ta’uus Obbo Lachiisaan akeekaniiru.
Gama hawaasummaatiin, manneen barnootaa Afaan Oromoo Finfinneefi Naannolee biroo keessatti dhiyeessii kitaabaafi barsiisaatiin deeggaruun walqabatee jalqabbiin jiru, dhukkuboota daddarboo to’achuun daa’imman rakkoo adda addaaf saaxilaman deeggaruun hojiin hojjetame gaarii dha jedhan. Kun akkuma jirutti ta’ee, dhiyeessiin qorichaa, ogeessotaafi meeshaalee wal’aansaa, istaandaardii manneen barnootaa eegsisuufi rakkoon dhiphina daree barnootaafi giddu gala oolmaa dargaggootaa haaraa ijaaruufi kan xumuurame tajaajilaaf oolchuu irratti hanqinni kan jiru ta’uu ibsuun gara fuula duraatti xiyyeeffannoon irratti hojjetamuu akka qabus Obbo Lachiisaan ibsaniiru.
Walumaagalatti Gabaasni Raawwii Hojiiwwan Ji’oota Jahaa Bara 2012 Kabajamoo Pireezidaantii Itti Aanaa MNOtiin dhiyaate haala olitti ibsameen Koreewwan Dhaabbii Caffeetiin xiinxalamaa, qoratamaafi kallattiin irratti kennamaa kan ture ta’uu, haalli gabaasichi itti dhiyaates gaarii ta’uu ibsuun Caffeen akka raggaasu gaafataniiru.
Toorbee kana 7492
Ji'a kana 46992
2008 irraa eggalee 4782924